SIDEE WAXTAR LEH OO RASPBERRY MADOW LOOGU TALAGALAY CAAFIMAADKA AADANAHA - RASPBERRY
Ugu Weyn Ee Raspberry
Isticmaalka raspberries madow: hantida faa'iido leh iyo ka hortagga
In jardiinooyin iyo cariishyada xagaaga waxaad mararka qaarkood heli kartaa duurka raspberry leh berry madow. Raspberry Tani waxaa lagu magacaabaa Blackberry. Qaar badan waxay u qaataan barkin. Dhab ahaantii, muuqaalku waa mid aad u ballaadhan: madow waaweyn oo leh miro guduud ah iyo caleemaha cirridka. Blackberry raspberry Black, isku dhafka hantida badan oo faa'iido leh raspberries cas iyo blackberries, iyaga ka sarreeya dhalidda, dhadhan iyo, dhan kasta, faa'iido u leh caafimaadka aadanaha.
Ma taqaanaa? Inta badan noocyada raspberry rasmiga ah ee hadda jira waxaa laga helaa USA. Waxay ahayd halkan, iyadoo saldhig u ah xayawaanka American-blackber-like raspberry, by N. Longawart ee 1832, kala duwanaanshaha Remontant Ohio helay.
Calorie raspberry madow
Raspberry Black, marka la barbardhigo casaan, waa shey aad u sarreeya - 72 kcal halkii 100 g oo ah 46-60. Marka la eego nuxurka yar ee borotiinka iyo dufanka iyo carbohydrateska waaweyn, raspberries madow ayaa loo isticmaalaa cuntooyinka borotiinka hooseeya. Berry raspberry madow oo laysku qurxiyo ayaa ah bedel wanaagsan oo ah cake ama nacnac nacnac.
Raspberry Black: ka kooban ee berry yaab leh
Dhammaadkii 1990-maadkii, iyada oo ay soo ifbaxday noocyo cusub oo bacrimin ah oo cusub, beeral badan ayaa ka baxsaday beerashada raspberries madow - iyo si aan micne lahayn!
Raspberry Black waxay ka kooban tahay unug gaar ah oo aan caadi ahayn, kaas oo u oggolaanaya in ay sii ahaato hogaamiye ka mid ah dhirta kale ee dhirta iyo daawooyinka. Cilmi-baadhayaal badan ayaa aaminsan in tayada raspberries madow ay dhaaftay dhammaan noocyo raspberry iyo noocyo kale oo Blackberry ah. Waxaa ku jira dhammaan fitamiinada, kuwa yaryar iyo macruufiyeyaasha, kuwaas oo ku jira dhirtaas (wax yar ka yar vitamin C iyo asiidhyada).
Ma taqaanaa? Waxay qaadatay siddeed iyo toban sano beereyaal Maraykan ah si ay u bartaan sida loo dacaayado raspberries madow. Sanadkii 1850-kii, H. Doolittle wuxuu awooday inuu taas sameeyo iyada oo la adeegsanayo lakabyo dabiiciga ah. Tani waxay gacan ka geysatay horumarinta firfircoon ee shaqada taranta ee Mareykanka iyo Yurub. Sanadkii 1896, D. Miller wuxuu caan ku ahaa cumberland caan ah. Darajadani raspberry madow waxay ku haysaa qoyaan -30 ° C. Bilowga qarnigii labaatanaad. Beeralayda ka soo jeeda Maraykanka, Faransiiska, Great Britain, Poland, Japan iyo dalal kale waxay darsaan tobanaan noocyo cusub (Bristol, Morrison, Naples, Dundee, iwm).
Laakiin Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee raspberry madow waa content weyn:
birta (ka sarreeysa dhammaan beruudaha kale), copper iyo manganese;
anthocyanins, antioxidants iyo ellagic acid (laba jeer strawberries, walnuts - saddex).
Intaa ka sokow, dhismaha fiitamiin-macdanta ee berry of raspberry madow ayaa metelaya maahan kaliya fitamiin C, laakiin sidoo kale kooxo fitamiin B ah (1, 2, 5, 6, 9), PP, A, E, H, iyo sidoo kale iodine, zinc, boron, potassium, calcium, fluorine, cobalt, fosfooraska, selenium, sodium.
Raspberry Black wuxuu ka kooban yahay fiber, polysaccharides, tannins.
Ma taqaanaa? Takhaatiirta (takhaatiirta iyo nafaqatada) ee Maraykanka ayaa xisaabiyay in haddii aad cunayso laba kiiloogar oo raspberry madow ah sannad, khatarta kansarka ayaa si buuxda u yareysa. Nidaamka jirku wuxuu kordhayaa, geedi socodka gabowga ayaa hoos u dhacaya.
Bogsiinta guryaha iyo faa'iidooyinka raspberries madow ee jidhka
Raspberry berri madow waxay heshay cinwaanka aan rasmiga ahayn "boqoradda of berry" ee hantida faa'iido leh. Iyadoo ay ka kooban tahay, waxay leedahay hanti gaar ah.
Isticmaalka joogtada ah ee raspberries madow ayaa kuu oggolaanaya inaad:
ka saar jirka jirka ee maadada culus iyo radionuclides (oo ay ugu wacan tahay guryaha shucaaca);
yareeyo heerka "kolesterool" xun;
cadaadis dhiig oo hooseeya;
kordhinta heerka unugyada hemoglobin, tirada unugyada dhiigga (ee daaweynta dhiig-yaraanta);
hagaajinta maqaarka iyo aragtida (kudheerta anthocyanins ee berry raspberry madow);
xoojinta darbiyada iyo hagaajinta xaaladda maraakiibta;
Ka saar bararka (kaadi-haysta);
hagaajinta habka dheef-shiidka, ka-tirtiridda dhibaatooyinka caloosha iyo mindhicirka;
yareynta khatarta ah neuvaska malawadka (oo ay ugu wacan tahay heerka sare ee ellagic acid), hoos u dhigida kansarka hunguriga hunguriga, ilma-galeenka, xiidanka iyo laabta.
Waa muhiim! Dadka qaba hurgumada dhiigga ee sareeya waa inay u rogaan isticmaalka caadiga ah ee raspberries madow. Buundada dhirta ee warshadani waxay beddeshaa kiimikooyinka waxayna bixisaa saameyn dheer oo joogto ah iyo natiijooyin joogto ah, oo aan saameyn muddo gaaban ah lahayn.
Raspberry madow ayaa si gaar ah faa'iido ugu leh caafimaadka haweenka. Marka la daaweeyo dhalmo la'aan, cudurrada jinsiyadaha kala duwan, waxaa lagu talinayaa in ay si firfircoon u cunaan raspberries madow. Haweenka qaba dhibaatooyinka caadada waxay ka cabbi karaan shaaha waxayna isticmaali karaan sifooyinka faa'iidada leh si loo yareeyo xanuunka, caadada loo mariyo wareegga, iwm.
Raspberry Black waa daaweynta ugu fiican ee loogu talagalay ARVVI. Honey oo lagu daray raspberries ayaa sii kordhiya sifooyinka wanaagsan ee daaweynta angina. Qalab wanaagsan oo loogu talagalay qashin-qubka waa decoction of berry raspberry madow. Berry Tani waxay si gaar ah faa'iido ugu tahay guga marka jidhku u baahan yahay fiitamiin wuxuuna u nugul yahay caabuq.
Ma taqaanaa? Biyaha sarreeya waa daaweyn cadaan ah, oo aad si dhakhso ah u qulquli kartid markaad sarkhaansanayd, yareyso saameynta hindhisto (waayo waxaad u baahan tahay inaad cabto litir biyo ah raspberry).
Ma aha oo kaliya berry, laakiin sidoo kale caleemo raspberry madow, oo sidoo kale ku jira walxo badan oo waxtar leh (asiidhyada organic, folic acid, iodine, manganese, flavonoids, fiitamiin C, K, E, magnesium, iwm) waxay leeyihiin hannaan daweyn. Leaves waxaa loo isticmaalaa qaab decoctions, infusions, shaaha. Maraqadu waxay daweeyaa hargabka, boronkiit (caleemaha waxay leeyihiin tarbiil wanaagsan iyo waxyaabo diaphoretic ah).
In daawada dad, shaah daawada laga sameeyey caleemaha raspberry madow waa mid aad u caan ah. Ka mid ah cuntada sida loo soo saaro caleemaha raspberry, ugu fudud in la shubo laba qaado oo ah caleemaha raspberry qalajiyey galay darmuuska iyo ku shub hal litir oo biyo karkaraya on. Saddex saacadood ka dib, faleebo ayaa diyaar u ah. Cab 100 ml saddex jeer maalintii 20 daqiiqo cuntada ka hor.
Waa muhiim! Caleemaha raspberry duban ayaa si fiican loo ururiyey Juun iyo Julaay. Waxay u baahan yihiin in laga soo qaado caleemaha sare - dhallinyaro, iyada oo aan waxyeello lahayn iyo iyada oo aan raad ka mid ah cudurka. Way ka fiican tahay inaad qallajiso qolka mugdiga, qallalan iyo qolal hawo leh oo ku yaal warqad (si aan wax urin).
Noocyada faa'iidooyinka leh ee ka mid ah caleemaha sida caleemaha anti-sclerotic, qufaca, tonic iyo kuwo kale ayaa iyaga ka dhigaya mid aan lagama maarmaan u ah daaweyn adag.
Faa'iidooyinka raspberries madow ee quruxda dumarka
Raspberry Black ayaa laga helaa isticmaalka firfircoonida isboolojiga. Oo ma aha oo kaliya berry, laakiin sidoo kale caleemaha raspberry iyo ubax ayaa loo isticmaalaa.
Sidaa darteed, caleemaha dhulka la jejebiyay (oo leh qoryo, qadar yar) - waxaa lagu burburin karaa hoobiye) waxaa loo isticmaalaa qaabka maskaxyada (finanka iyo maqaarka maqaarka). Maaskigu wuxuu ku soo rogaa 15-20 daqiiqadood wuxuuna ku dhaqaa biyo kulul.
Decoction ah ee caleemaha dhaqday timaha - waxay u bogsiinaysaa, xoojiyaa xididada, kicinaysaa koritaanka. Laga soo bilaabo ubaxyadii raspberry madow samee decoction, taas oo loo isticmaalo daaweynta ee erysipelas.
Meelaha faa'iido leh ee casiir ah ee berry raspberry madow, kuwaas oo si firfircoon loo isticmaalo cosmetology loogu talagalay haweenka, waa awooda lagu ilaaliyo maqaarka maqaarka, xoojiyaan indhaha, iyo joojiyaan nidaamka gabowga.
Sumoobi raspberry iyo casiir khafiif ah ayaa ah qaybta ugu weyn ee maskooyinka:
maqaarka duban - berry (daloolka maqaarka ku darso maqaarka);
maqaarka caadiga ah / qallalan. Isku qas xajiimaynta raspberry (2 qaado) leh xumbo ukun (garaac 1 ukun), labeen dhanaan (1 qaado shaah) oo codso 20 daqiiqadood. Biyo raaci biyo qabow. Doorasho kale waa maskaha iyo maskaha maskaxda.
Si waxtar leh u nadiifiyaa maqaarka raspberry madow. Wixii diyaarinta waxay u baahan tahay 1 tbsp. l raspberries iyo 300 garaam oo vodka ah. Raspberler waa inay ku adkeeyaan meel mugdi ah muddo 10 cisho ah, cadaadis, ku dar 600 ml oo biyo nadiifa ah.
Sida loo doorto raspberries marka aad iibsaneyso
Miraha raspberry madow oo si fudud u gudbin kara gaadiidka, waxay haystaan ​​cufnaantooda iyo sharafkooda mudo dheer, sidaas darteed ma jiraan dhibaatooyin gaar ah marka la dooranayo raspberries ee suuqa. Doorashada raspberries madow, waa in aad si habboon u qiimeysaa aragga iyo si taxadar leh (qaado berriga farahaaga). Inta ugu badan oo dhan waa in la isku dayo oo la qiimeeyo dhadhankiisa iyo caraf udgoon.
Raspberry waa madow, iyo sidoo kale casaan, ma keeni karaan faa'iidooyin kaliya, laakiin sidoo kale leeyihiin qaar ka horjoogsanaya in aad u baahan tahay in la ogaado ka hor isticmaalka berri this.
Raspberry Black laguma talinayo dadka:
Cadaadiska xasaasiyadda alerjiga ee raspberries;
oo leh xanuunka caloosha.
Ma taqaanaa? In dhexda dhexe dhexe ee dhammaan noocyo raspberry madow, raspberry Cumberland (lat Rubus Kumberlend) si fiican u kicin. In muuqaalka, raspberry tani waxay u egtahay mid ka mid ah BlackBerry (laakiin, si ka duwan isaga, berry bislaado si fudud laga saaro asliga ah). Cumberland waa noocyo kala duwan oo udub dhexaad u ah oo abaar ah oo leh berry oo hore u bislaaday. Berry aan la qubaysan, dabeecadda, malab macaan dhadhanka oo leh dookh yar. Iyada oo daryeel ku habboon, ayuu ficil ahaan ma jiran, ma jiraan wax cayayaanka, shimbiraha ma jeexan berry.
Waxaa badanaa la weydiiyaa sida raspberries saameyn ugu yeelan karto koorsada uurka, waa maxay faa'iidooyinka iyo waxyeelada caafimaad ee hooyada iyo ilmaha. Raspberries madow ma aha kuwo ka hortagaya haweenka uurka leh (oo ka duwan sida gaduudka, taas oo kicin kara xasaasiyadaha xasaasiyadda ee ilmo), laakiin tiro macquul ah. Taas bedelkeeda, isku-darka gaarka ah ee fiitamiinada iyo macdanta ayaa aad u faa'iido badan marka ilmuhu qaado. Shaaha caleenta qajaarka ah ayaa sababi kara foosha ilmaha, sidaa daraadeed waxa fiican in laga hortago xilliga hore ee uurka.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Raspberry 2020